पतिलाई घृणा गर्दछ
सधैं पारिवारिक जीवन आनन्द र रोमांस भरिएको छैन। त्यहाँ पतिहरू सजिलै सजिलै छन् जब तिनका आमाबाबुले भने। भावनाको एक फिटमा, उनी निष्पक्ष रूपले सदस्य र परिवार संग आफ्नो सम्बन्धलाई हेर्न सक्दैन, जलन को कारण पत्ता लगाउँछन्। सबै पछि, एक पटक त्यो यस मान्छे को बारे मा पागल थियो, तर अब सबै केहि माथि उल्लेखित।
यस प्रकारको जलनको कारणहरू बुझ्न प्रयास गरौं र पतिले घृणा गर्दछ भने पुरानो भावनाहरू कसरी प्राप्त गर्ने।
पति किन अचम्म छ?
तपाईंको पतिको सम्बन्धमा जलनको कारण निर्धारण गर्न, आफ्नो र उनको मनोवैज्ञानिक उमेर निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंको पासपोर्टमा निर्दिष्ट उमेरमा फरक छैन। तपाईं वयस्क उमेर को बावजूद पनि एक शिशु जस्तै काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईंको पतिले किशोरीको रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने महत्वाकांक्षी आपूर्तिको साथ व्यवहार गर्न सक्छ। र यो हुन सक्छ कि, वास्तवमा तपाई पतिको साथ रिस उठाउनुहुन्छ वा, उदाहरणका लागि, आफ्नै पतिको बहिनीलाई मात्र इन्कार गर्दछ किनभने यो एक प्रकारको व्यक्ति हो जुन तपाईं सास फेर्न सक्नुहुन्न।
सबै चाँडै वा पछि, तर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तनहरू चाहन्छन्। एक पटक जब तपाईं आफ्नो प्रिय पतिको आमाबाबुको मायालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर अब तपाईं यसको थकित हुनुहुन्छ। तपाइँ केहि नयाँ चाहानुहुन्छ। अनि तपाईंको पति अझै पनि छविमा रहेको थियो जुन तपाईं अब चासो राख्नुहुन्न।
तर तपाईं पनि तथ्यबाट चिन्ता गर्न सक्नुहुन्छ कि, उदाहरणका लागि, एक पतिले सम्बन्ध परिवर्तन गर्न चाहन्छ, र तपाईं आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न, तपाईं यसको साथ सहज हुनुहुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक उमेर हो।
अर्को चरणमा तपाईं असन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि कारणहरू निर्धारण गर्न अर्को चरण वा तपाईं आफ्नो पतिको रिश्तेले घनिष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि तपाइँ कुन कुरा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, र जो तत्काल सबै कुरा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ। एउटा सूची बनाउनुहोस्, जुन तपाईंको पति वा अन्य व्यक्तिहरूको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई संकेत गर्दछ जसले तपाईंलाई चिन्ता गर्दछ। एक र दोस्रो स्तम्भमा शीर्ष दस भन्दा महत्त्वपूर्ण गुणहरू चिन्ह लगाउनुहोस्। तपाईंको पतिको बारेमा देखाउनुहोस्। यी गुणहरू एकसाथ विश्लेषण गर्नुहोस्, ती मानिसहरू सहित तपाईका साथ रिस छन्। स्थिति बाहिर निकाल्न विकल्पहरू छलफल गर्नुहोस्।
अनि अब हामी मुख्य कारणहरूको सूचीमा जान्छौं जसमा तपाईं आफ्नो पतिको साथ गुस्सा हुन सक्नुहुनेछ।
तपाईंको जलनको कारण जस्तो हुन सक्छ यदि यो तपाइँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्न, तर अब यो सबै फेरि पुन: आउनुभयो।
त्यसोभए त्यो कारण छ कि पतिले तपाईसँग आफ्नो जीवनबाट महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बाँडेका छन्। तपाइँसँग सम्भावित जीवन छ कि तपाईं द्वारा साझा गरिएको छाप छ।
तपाईंको पतिले बेहोशपूर्वक आफ्नो काममा आफैंको सानो भाग निवेश गर्न इन्कार गरे। यसको कारण, तपाईं अझ बढी आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्न सुरु गर्न सुरु। आदि त्यहाँ पतिघर तिर जलन र घृणा छ।
यदि, जन्म दिन पछि पतिले अशुद्ध बनाउँछ, त्यसपछि उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तनको कारणलाई नवीकरण गर्न प्रयास गर्नुहोस् वा तपाईंको व्यवहारमा, जसको परिणामस्वरूप, तपाईंले चिन्ता महसुस गर्नुहुन्छ।
त्यसकारण, पति-पत्नीको जलनको कारण धेरै हुन सक्छ। मनोवैज्ञानिक युगबाट सुरु र तथ्यको अन्त्यमा असहमतको कारण मात्र पत्नीमा लुकेको छ।
अपरिचित प्रेम - के गर्ने?
पुरुष र महिलाको दृष्टिकोणबाट सम्बन्धको मनोविज्ञान
पातहरू किन ड्रेकाना गिरिन्छन्?
विवाहको प्रवृत्ति 2015
रेशम महिलाको संक्षिप्त
वर्षा मा puddles मा बुलबुले - एक चिन्ह
तिल तेल - राम्रो र खराब
कुरो सोफेमा Eurocover
Ludza - आकर्षण
पोर्क प्यानमा पोर्क
शाम प्राइमस तेल
कवरेज पातहरूमा रातो धब्बा - कसरी छुट्याउने?
साक्षात्कार कसरी सफल भयो?
वुडी एलेनले युवाहरूको एलिक्सरको लागि नुस्खालाई बताए
हुडसँग महिलाको न्यानो कमरकोट
खैरो क्रीम संग खट्टा क्रीम पाई
ज्वाररीमा पानी किन हराउँछ?
मेरो आँखा किन आईपुग्छ?
भान्सा तह तालिका
पेट कसरी कुन्निन्छ?
भ्रूणको लागि DMF
शशि केबिन आस्तीनमा ओवनमा